बिस्केट जात्रा के हाे ? किन मनाइन्छ ? कसरी मनाइन्छ ? - DURBAR TIMES
HomeCulture & Religionबिस्केट जात्रा के हाे ? किन मनाइन्छ ? कसरी मनाइन्छ ?
जात्राभित्रको जात्रा भनेर चिनिने बिस्केट जात्रा नेपालको भक्तपुर जिल्लामा मनाइने गरिन्छ । नेवारी समुदायले मनाउने यो जात्रा चैत्र महिनाको अन्तिम देखि नयाँ वर्ष बैशाखको सुरूको चार दिनसम्म मनाउने गरिन्छ । आठ रात, नौ दिनसम्म मनाइने सो जात्रा सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्वको बिस्केट जात्रालाई ‘बिस्का ‘ जात्रा पनि भनिन्छ ।
बिस्केट जात्रा भोलीबाट सुरू हुँदैछ । बिस्काः जात्रा ‘खाइ संल्हु’का दिन मानाइने गरिन्छ। बिस्केट जात्राको पहिलो दिन बिहानैदेखि भैरव र भद्रकालीको पूजा गरेपछि दिउँसोबाट भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ तानेर जात्रा मनाइने परम्परा रहेको छ । विस्केट जात्राको चौथो दिन पुरानो वर्षको बिदाइको पूर्वसन्ध्यामा ल्योसिं लिङ्ग ठड्याइन्छ । परापूर्वकालदेखि चलिआएको विश्वप्रसिद्ध बिस्केट जात्रा बिस्केट अर्थात ‘सर्प मारियो’ भन्ने अर्थमा नेवार समुदायमा मनाइने जात्रा हो । यो जात्रामा तान्त्रिक विधि अनुरूप निर्माण गरिएको भैरव र भद्रकालीको रथ तौमढीबाट भक्तपुरको माथिल्लो क्षेत्र क्वाछें, साकोथा, सुकुलढोका, गोलमढी पुर्याइ फर्काउने प्रचलन छ । रथलाई तल्लो क्षेत्रमा गःहिटी पुर्याएपछि पहिलो दिनको रथयात्रा बिसर्जन गरिन्छ ।
ल्योसिं उभ्याइने र ढाल्ने जात्रा नै विस्केटको प्रमुख जात्रा हो । मल्ल राजाहरूले भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ जात्रा समावेश गरी तान्त्रिक पूजा विधि विधानसमेत थप गरी आठ रात नौ दिनसम्म जात्रा मनाउने प्रचलन थालिएको बताइन्छ । लिच्छवीकाल देखि सुरू भएको प्रत्येक नयाँ वर्षमा मनाइने भक्तपुरको प्रसिद्ध विस्केट जात्रा भव्यरूपमा मनाइन्छ ।
जात्रा हेर्न बिहानैदेखि भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडाैँ, काभ्रे, बनेपा र सिन्धुपाल्चोकदेखि मानिसहरू भक्तपुर पुग्ने गर्दछन् । बिहानै देखि भक्तपुरका बासिन्दाले ल्योसिं उभ्याएको ठाउँमा बलि दिने र पूजा गर्नेको समेत घुइँचो लाग्ने गर्छ । मध्याह्न समयमा इन्द्रायणी पूजा सम्पन्न गरी अपराह्नमा गुठी संस्थान, भक्तपुरबाट आएका व्यक्तिले इन्द्रायणीमा बत्ती बाली दुभाजु चोकमा मूल पुजारीलाई तरबार बुझाएपछि पुजारीले कुसुलेहरूलाई खासापा बुझाई सुनको ढोका अगाडि इन्द्रायणीको प्रसाद लिई साँझ भेलुखेलमा गई ल्योसिंमा अन्तिम पूजा गरी ल्योसिं ढाल्ने परम्परा रहेको छ । सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको विस्केट जात्रा हेरेमा शत्रु एवम् दुःख नाश हुने किम्बदन्ती रहेको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ ।
Previous articleसुर्खेतको सिस्नेरीमा आगलागी, नौ घर नष्ट
Next articleसिंगटी हाइड्राेकाे आइपिओ रिजल्ट आज आउँदै , कतिले पाउँछन् ?